आमा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २५, २०७८ राबत
झरीको एक बिहान
आकाश नै धर्तीमा झरिरहेको बेला
तिमी भने आकाशतिरै गयौ
आमा, तिमी आकाश भयौ !
अब कसरी छुनु मैले आकाशलाई ?
आकाशमा छन् जूनतारा
अब तिम्रो सहारा
आकाशमै डुल्छ घाम
म एक्लो पो कता जाम्
न छ मसँग, तिम्रो कान्छीऔंला
न छ मसँग, तिम्रो मुटुको दरी
न छ मसँग, मैले ऐना हेर्ने तिम्रो आँखा
म त केवल
तिम्रो सम्झनालाई अघि लगाएर
पछिपछि कुदिरहेछु– यो संघर्ष–लोकमा
आमा, के आकाशबाट म देखिन्छु ?
उधारो रासनपानीका निम्ति
किरानापसलेसँग याचना पो गर्दै छौ कि !
बाउको कुटाइले मामाघरतिर पो भाग्यौ कि !
मेरो पढाइको ऋण तिर्न
ढुङ्ग्री फुकालेर साहुको ढोकामा पो पुग्यौ कि !
र, कहिलेकाहीँ लाग्छ–
यो लठ्ठु छोरोलाई हल गाँसिदिन
कुटुम्बहरुको दैलो पो चहार्दै छौ कि !
कहीँकतै देख्तिनँ तिमीलाई
कहीँकतै भेट्दिनँ तिमीलाई ।
भदौको एक बिहान
जगत्ले नै आकार लिइरहेको बेला
तिमी भने अन्धकारमा विलीन भयौ
आमा, तिमी निराकार भयौ !
अब कसरी देख्नु मैले निराकारलाई !
भीरपाखाहरुमा सुनिने दुःखको स्वर
तिम्रैजस्तो लाग्छ !
भन्ज्याङबाट भारी बोकेर झर्ने मधुरो छाया
तिमीसँग दुरूस्तै मिल्छ !
काखमा नानी च्यापेर
खोला किनारमा गिट्टी कुटिरहेका
ती आमाका अनुहारहरु
ठ्याक्कै तिम्रैजस्ता लाग्छन् !
आमा, के तिमी अझै यतैकतै छौ र ?
जीवनका हरेक बिसाउनीहरुमा
मलाई हाँस्न मात्र सिकाएर
किन रून सिकाएनौ ?
तिमीबिनाको यो एकान्तमा पनि
म रून जानिरहेको छैन ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ १०:०३
आरक्षका अर्ना संरक्षणमा चुनौती
वैशाख २५, २०७८ डिल्लीराम खतिवडा
उदयपुर — कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा घरपालुवा जनावरका कारण अर्ना संरक्षण चुनौती बन्दै गएको छ । घरपालुवा भैंसीलाई अर्नासँग वर्णशंकर गराएर पाडापाडी निकाल्ने समूह सक्रिय भएकाले चुनौती बनेको हो ।
आरक्ष क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी घरपालुवा गाईभैंसी छन् । आरक्ष क्षेत्रमा लामो समयदेखि छोडिएका भैंसी र तीनका सन्तान (पाडापाडी) मा अर्नाकै जस्तो जंगली स्वभाव भइसकेको छ । त्यसैले आरक्ष क्षेत्रबाट घरपालुवा भैंसी हटाउन चुनौती बन्दै गएको हो ।
आरक्ष क्षेत्रमा रहेका अर्नासँग ‘क्रस’ गराइएका भैंसी पनि झट्ट हेर्दा अर्नाजस्तै ठूला–ठूला सिङ भएका देखिन्छन् । आरक्षमा अर्नाभन्दा अर्नासँग ‘क्रस’ (वर्णशंकर) भएका भैंसी बढी छन् । आरक्षले वैशाख ६ देखि ११ गतेसम्म अर्ना गणना गरेको थियो । गणना प्रतिवेदनअनुसार ५७ वटा अर्ना बढेको पाइएको छ । थपिएको ५७ सहित अर्नाको कुल संख्या ४ सय ९८ पुगेको छ ।
२०७४ सालमा भएको गणनामा आरक्षभित्र ४ सय ४१ वटा मात्र अर्ना थिए । २०३२ सालमा स्थापना भएको कोसी टप्पुमा सुरुमा ६३ अर्ना मात्र थिए । त्यसयता क्रमशः अर्नाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि संरक्षण अभाव हुँदै गएको आरक्ष प्रशासनले जनाएको छ ।
घरपालुवा चौपायको चरिचरन रोक्न नसकिएको आरक्षका संरक्षण अधिकृत अशोक रामले बताए । ‘आरक्ष क्षेत्रमा ४ किसिमका जनवार छन्’ रामले भने, ‘पहिलो अर्ना, दोस्रो आरक्षनजिकै गोठ राखेर भित्र चरिचरनका लागि छोडिएका भैंसी, तेस्रो ८–१० वर्षदेखि नै रहेका १० हजारको संख्याका गाई (जुन गाई जंगली नै हुन्) र चौथो दैनिक चरिचरनका लागि आरक्ष क्षेत्र आसपासका गाउँबाट आउने चौपाया ।’
त्यसमध्ये आरक्षनजिकै गोठ बनाएर रातभरि भित्र छोडिने भैंसीका कारण अर्ना सरक्षणकामा चुनौती भएको उनले बताए । राति आरक्ष क्षेत्रमा छोडिने भैंसीबाट अर्नासँग वर्णशंकर भएर जन्मिने पाडापाडी समस्या भएको सरक्षण अधिकृत रामले बताए । आरक्ष सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर तीन जिल्लाको सप्तकोसी तटीय क्षेत्रमा छ । यहाँ विश्वमै दुर्लभ मानिएको बाबुलिस जातको अर्ना पाइन्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ १०:०२